Abdikafi Mahamud “ Madaxwayne Qoor Qoor waa Dagaal doon, waa dhiig doon, waa nin farxadiisu tahay dagaal iyo dhiig. | Dayniile.com
Home Warkii Abdikafi Mahamud “ Madaxwayne Qoor Qoor waa Dagaal doon, waa dhiig doon,...
Abdikafi Mahamud “ Madaxwayne Qoor Qoor waa Dagaal doon, waa dhiig doon, waa nin farxadiisu tahay dagaal iyo dhiig.
Abdikafi Mahamud oo ka mid ah siyaasiyiinta Galmudug horayna u soo noqday wasiirka Qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug, ayaa ka hadlay Xaalada Galmudug iyo in Galmudug kujirto waqtiga ugu xumaa intii ay jirtay.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Madaxwayne Qoor Qoor yahay dagaal doon, dhiig doon, uuna isaga hurinayo Colaada Guriceel.
“ Ahlusunna ma doonayso dagaal, weerar kuma ahan maamulka Galmudug, doorahadana ma diidana, kaliya ASWJ waa Shabaab diid”ayuu yiri Abdikafi Mahamud oo ka mid ah siyaasiyiinta galmudug xilalka ka soo qabtay.
Waxa uu sheegay ASWJ waxay cadaynaysaa in aysan doonayn dagaal ay la gasho cid aan ka ahayn cadawga ummadda soomaaliyeed ee Al Shabaab.
“ Waxaan u baaqaynaa dadka soomaaliyeed ee nabada jecel, Raysulwasaraha soomaliya, saaxiibada soomaaliya iyo hayadaha xaquuqul insaanka in ay wax ka qabtaan kana hortagaan dhiiga Madaxwayne Qoor Qoor daadinayo ee reer Galmudug.
“Qasadka ASWJ kaliya waa In ay shacbiga Galmudug ka xoreeyaan Al Shaabaab”ayuu mar kale yiri Abdikafi Mahamud oo ka mid ah siyaasiyiinta Galmudug.
Sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka Guriceel in ay u midoobaan Difaacooda, ayna meesha ka saaraan kala aragti Duwanaanshaha.
Ugu dambayntii sheegay in dhibaatadii ka timaado halkaas ay Mas’uul ka Noqon doonaan Villa Somaliya iyo Qoor Qoor.
Previous article18- Nugaal wuxuu ka kooban yahay afar degmo
Next article17- Jubada hoose wuxuu ka kooban yahay shan degmo
Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Jowhar ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle ayaa sheegay iney talaabo adag ka qaadi doonaan dadka leh maqaayadaha iyo Farmashiyeyaasha ee qashinka...
Xuska Maalinta Naafada Adduunka oo ku beegan 3-da Dicember oo ku...
Waalidiinta afar wiil oo bada lagu waayey lix bilood ka hor...
Baadari Desman Tutu, oo ku guuleystay abaal marinta biladda Nabadda “Nobel...